Facebook Plea avy amin'ny tena Tia Tanindrazana hamonjy ny Air Seychelles
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Facebook Plea avy amin'ny tena Tia Tanindrazana hamonjy ny Air Seychelles
Seychelles Discovery Tour dia maniry anao hizara ny lahatsorany facebook araka izay tratranao. Ny hafatra dia: tsy tokony hikatona ny Air Seychelles.
Air Seychelles dia tsy tokony hakatona, fa rehefa mitsidika ny Tranonkala Air Seychelles ary tadiavo ny sidina ho an'ny zotra iraisam-pirenena, ny valiny dia: "Tsy misy sidina hita"
Air Seychelles no reharehan'ny Repoblikan'i Seychelles. Seranam-piaramanidina tsara izy, nefa koa very vola be isan-taona.
Ny zotra iraisam-pirenena tokana ahazoana tombony dia ny avy any Seychelles ka hatrany Maorisy, ankoatry ny sidina anatiny, izay nanjakan'ny kaompaniam-pirenena. Ny sidina eto an-toerana no mety sisa tavela raha velona ny mpitatitra.
Ny fifanarahana karama tsy mitombina sy ny ekipa mpitantana zokiolona napetrak'i Etihad Airways dia nandehanan-dra, hoy ny olona iray manam-pahaizana eTurboNews.
Amin'izao fotoana izao, ny Air Seychelles dia manana trosa betsaka amin'ny National Carriers of the UAE, miampy ireo tompon'andraikitra. Ny mpandinika dia mino fa na dia eo aza ny fanohanan'ny Governemanta Seychelles, na ny governemanta Seychelles aza tsy mahazaka ny kaompaniam-pireneny.
Ity lohahevitra ity no adihevitra be pitsiny indrindra tany Seychelles, 3 volana taorian'ny fifidianana filoha vaovao ho an'ny firenena nosy amin'ny olona latsaky ny 100,000.
Ho an'ny Air Seychelles dia zava-misy fa ny fikirakirana ny tany no lafo indrindra ao amin'ny faritra noho ny ampihimamba
Ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany any Seychelles dia miady ho an'ny fahavelomana, izay mitarika Seychelles Discovery Tour mba handefa an'ity fangatahana tsy nasiam-panovana ity tao amin'ny Facebook:
TSY tokony hakatona ny volotara rivotra
Ho fialan-tsasatra tsy manam-paharoa, amin'ny maha-vondrona nosy granitika ranomasina tokana eto an-tany, satria toerana tokana misy ny voanjo Cocodemer lehibe indrindra ary mavesatra indrindra ao aminy, toerana voajanahary, satria manana iray amin'ireo renivohitra kely indrindra eto an-tany, toy ny manana morontsiraka mahafinaritra indrindra eto an-tany, amin'ny maha iray amin'ny tantaran'ny trano fonenana tanora indrindra ary iray amin'ireo fangaro foko mahafinaritra indrindra eto an-tany;
tokony hanana mombamomba ny avonavona ihany koa isika, ny maha-izy an'i Seychellois (e), manana ny pasipaorontsika manokana izay mahery indrindra aty Afrika sy firenena faha-27 an'ny fahalalahana fitetezana an'izao tontolo izao mankany amin'ny firenena sy faritany 150, manana rivotra madio indrindra aty Afrika, manana iray ny ranomasina madio indrindra eto an-tany
ary izahay AIRLINE AZY ATAO AMIN'NY CREW 100% SEYCHELLES.
Tokony hiaro ny maha-izy antsika sy ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka izay maneho ny fahaleovantenantsika sy ny fizakantenantsika amin'ny maha repoblika antsika. Eny angamba isika tokony ho nitantana azy tsara kokoa ary hampiroborobo azy bebe kokoa amin'ireo mpitsidika sy ny eo an-toerana ary izany no sasany amin'ireo teboka;
1) Tahiry manintona sy mifaninana tsara kokoa noho ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka hafa.
2) Sidina mivantana misimisy kokoa.
3) Taham-ponenana mora vidy kokoa hisarihana ny tsena eo an-toerana.
4) Avela hisidina any amin'ny firenena UAE rehetra, anisan'izany i Dubai
5) Ny sarany dia tokony hisarika ny mponina rehetra hampiasa Air Seychelles amin'ny làlana rehetra atolotry ny kaompaniam-pitaterana anay fa tsy an'ny mpitatitra hafa. Tokony ho voatery ny Air Seychelles ihany no hampiasa ny mponina raha tsy feno na tsia ny lalantsika.
6) Manolora tombony Seychelles ho an'ireo izay manidina miaraka amin'ny Air Seychelles, ohatra, efitrano fandraisam-bahiny malalaka ho an'ny fandroana sy fitehirizana entana, fidirana maimaim-poana amin'ny zaridainam-pirenena na saram-piavotan-tsambo any amin'ny nosy sasany, tolotra volan-tantely misy fihenam-bidy na fonenana manokana toy ny tantely toy ny labozia. fisakafoanana maivana na fanomezana amin'ny mariazy, vidin'ny taxi manokana, tahan'ny fihenam-bidy amin'ny Internet sy maro hafa.
7) Marketing amin'ny zotram-piaramanidina mafimafy kokoa amin'ny takelaka fisoratam-panoratana sy foara fivarotana fizahan-tany, any amin'ny biraon'ny famandrihana.
8) Ampiasao amin'ny fiaramanidina manokana Air Seychelles ho taxi fiaramanidina ho an'ny vondrona fihaonambe, olo-malaza, diplaomaty, mpandraharaha, sidina vonjy maika ary na dia mpitsangatsangana tsy miankina izay te hisoroka ny vahoaka aza. Izy io dia afaka miasa toy ny tankeran'ny solika, tsy voatery any Seychelles ihany.
9) Manambola bebe kokoa amin'ny eo an-toerana amin'ny fitantanana sy ny departemanta rehetra ao aminy. Ataovy ao anaty fandaharam-pianarana ny fizahantany manomboka amin'ny sekoly ambaratonga voalohany. Ampianaro ny tanorantsika ny lanjan'ity indostria ity ary ampio izy ireo hifanaraka amin'ilay indostria amin'ny famaranana feno.
10) Ataovy rehareha indray i Seychelles
Ao amin'ny taratasy matevina, nandefa ity masoivoho ity:
MBA TONGAVA IZAO NY ANARINANTSIKA ARY manome lanja ny fisiany. AZA MANDRESY AIRLINES hafa FA AZA MITADIAVA AMIN'NY SEYCHELLES AZY NY VOLA RAHA MBOLA TE HAHITA TAMAKY AMIN'NY KOLONY REHETRA
MBA ZARAO INDRINDRA INDRINDRA IZAY AZO ATAO IZAO.
Rama Sivaraman dia miditra amin'ny MENTIS, Inc. ho talen'ny fitantanana